-Gbọ ala eletriki ga-aghọ oke osimiri na-acha anụnụ anụnụ na ụlọ ọrụ 3C
Na ngosipụta akpaaka, ọ bụghị naanị na ndị nrụpụta ụgbọ ala nke ụlọ na ndị si mba ọzọ, Bosch, New World na ndị nrụpụta akụrụngwa ndị ọzọ amaara ama enwetakwala bọọlụ zuru ezu, ọtụtụ ngwa elektrọnik na-abụrụ nnukwu ihe ọzọ. N'oge a, ụgbọ ala enweghị l ...
Rindalata ụgbọala ụlọ ọrụ eletrọniki kwesịrị ịchọ “ụzọ ọpụpụ” ọhụụ
Igwe eletriki, nke na-eto ngwa ngwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya, nwere ike ịnwe nsogbu. Freescale, onye ndu ahia uwa nile na semiconductor nke akpakanamde, toro 0,5% na nkeji nke abụọ. Electronic ụlọ ọrụ yinye downstream nlaazu, kpebiri na dum zuru ụwa ọnụ electronic ụlọ ọrụ w ...
Rịba ama na-ejide "akụrụngwa odida Analysis Technology na Practice Case" Ngwa analysis Senior Seminar
Rịba ama na-ejide "akụrụngwa odida Analysis Technology na Practice Case" Ngwa analysis Senior Seminar The ise Institute of Electronics, Ministry of Industry and Information Technology Enterprises and institutions: Iji nyere ndị injinia na ndị ọkachamara aka ịmata nke ...
Innovation bu eze, achoro Skyworth
Innovation bụ eze, a hụrụ Skyworth mma Nnyocha ahụ gosipụtara na ịdị mma, okwu ọnụ, na ọrụ bụ isi ihe kpatara ndị ahịa iji họrọ ngwaahịa, yana ọ bụ ọtụtụ mmadụ ji kpọrọ ihe. Ezigbo mma, akụrụngwa ụlọ dị mma bụ ihe onye ọ bụla chọrọ. Na nke ...
Gbanwe ụzọ nke mmepe, na -emepụta ụdị ndị a ma ama n'ụwa
Gbanwe ụzọ nke mmepe, na-eke ụwa ama ụdị Kemgbe afọ gara aga, site a usoro nke mba ulo oru nkwado atumatu na jikoro mụbaa anụ ụlọ ina na-amụba ego, mmepụta na ahịa nke China na ezinụlọ eletriki ngwa nwere n'ihu ...
Mgbakọ SMT, Assemblylọ Mgbakọ PCB, SIP PCB, Isiike Flex PCB Cost, High Volume PCB, Isiike Flex PCB ricgha,